Devozione alla Medaglia Miracolosa: la coroncina delle grazie | Io amo Gesù
O rubere nye onyinye nke ọrụ ebube: chaplet nke graces
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 20, 2020
O Nwanyị di nsọ nke Medal ebube, onye nwere ọmịiko site na nhụjuanya anyị, gbadara site n 'elu igwe iji gosi anyị otu ị lebara anya na ihe mgbu anyị na otu ị na-eme ike gị niile iji wepụ ntaramahụhụ nke Chineke n'aka anyị wee nweta amara ya, nyere anyị aka na mkpa anyị ugbu a. me kwa ka amara nke ayi riọrọ n'aka-gi.
O Mary tụụrụ ime n’enweghị mmehie, kpee ekpere maka anyị ndị na-arịọ Gị. (ugboro atọ).
O Mịnịsta na-amaghị nwoke, onye mere anyị onyinye nke ihe nrite gị, ka ọ bụrụ ihe idozi maka ọtụtụ ajọ mmụọ na anụ ahụ na-emekpa anyị ahụ, dịka nchekwa nke mkpụrụ obi, ọgwụ nke ahụ na nkasi obi nke ndị ogbenye niile, lee, anyị ji obi ekele were ya na obi anyị na anyị na-arịọ gị maka ya ka ọ zaa ekpere anyị.
O Nwanyị di nsọ, onye kwere nkwa onyinye dị ukwuu nye ndị na-etinye ego gị, ma ọ bụrụ na ha kpọkuru gị na ejaculation ị kụziiri anyị, anyị, juputara na ntụkwasị obi n'okwu gị, tụgharịa ma rịọ gị, maka ịtụrụ ime gị, amara nke anyị chọrọ.
Nrara nye St Matthew: ekpere iji zọpụta mkpụrụ obi!
Ura nye St. Paul: ekpere nke n’enye udo!
Nraranye nye Mark Mark: Ekpere nye Ndi n’eso uzo P ol!
Ọsọ ọsọ na - efe ofufe: February 26, 2021
Ekpere a na-enwetụbeghị ụdị ya ma dị irè maka obi na-echegbu onwe
Ife ofufe St. Dominic: Ekpere ahụ ga-enye gị ọ joyụ!
Nsọpụrụ Chineke: Ekpere St Augustine!